Howlgalka AMISOM oo waqtiga loo kordhiyay – Banaadir Times
By banaadir 14th May 2021 56 No comment
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), oo ka kooban dalalka Afrika qaarkood, wuxuu kordhin doonaa howlgalkooda Soomaaliya illaa 31-ka Diseembar, 2021, sida ay sheegeen ilo-wareedyo rasmi ah.
Golaha Nabadda iyo Amniga (PSC) ee Midowga Afrika ayaa ku warramay in go’aanka lagu kordhinayo howlgalkooda lagu qaatay is afgarad guud oo la isku raacsan yahay.
Ka dib heshiiskii PSC, oo ah hay’ad go aan gaar ah ka gaarta ka hortagga, maaraynta iyo xallinta khilaafaadka, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay (UNSC) waxaa uu ku dhawaaqay sii kordhinta howlgalka si loo sii waddo dagaalka Al-Shabaab.
Warbaahinta ayaa soo warisay in Midowga Afrika (AU) iyo qorshihii ugu horreeyay ee Qaramada Midoobay ay ahayd in AMISOM, oo ah hawlgal taageero nabadeed oo ay la socdaan 22,000 oo ciidan ah oo ku sugan dhulka, ay si tartiib tartiib ah uga baxaan Soomaaliya maalmaha soo socda.
Go’aanka lagu kordhiyay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo loo diyaar garoobayo qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo muran badan ka dhashay.
Qoor Qoor oo bilaabay wada-hadalo lagu xalinayo shaqaaqo ka dhatay dil Sheekh Caan ah